कांग्रेस भन्छः ओली सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त, जथाभावी ऋण नलिन चेतावनी ! « GDP Nepal
( Thursday, April 15, 2021)
कांग्रेस भन्छः ओली सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त, जथाभावी ऋण नलिन चेतावनी !
Published On : 23 December, 2018 9:10 pm
काठमाडौं । केपी ओली सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको छ ।
कांग्रेस महासमिति बैठकले ओली सरकारले बूढीगन्डकी आयोजनादेखि सुन र चिनी कान्ड तथा वाइडबडीमा सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो । यस्तै, ५० अर्बभन्दा माथिका आयोजना सीधै ठेक्का दिने निर्णयले पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रुप दिन खोजेको कांग्रेसको ठहर छ ।
आइतबार सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित समसामयिक प्रस्तावमा कांग्रेसले सरकारमाथि भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको गम्भीर आरोप लगाएको हो ।
“वर्तमान ओली सरकार भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दैछ, राज्यका साधन र स्रोतको व्यापक दुरूपयोग गर्दैछ र अधिकारको केन्द्रीकरण गर्दैछ,” महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ, “वर्तमान सरकारको ५० अर्ब माथिका आयोजनालाईहरूलाई बिनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक छ ।”
यस्तै, कांग्रेसले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर बिनाप्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढंगबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
बूढीगण्डकी विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने सो निर्णय तत्काल बदर गर्न पनि कांग्रेसको माग छ । त्यस्तै वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन पनि महासमिति बैठकले माग गरेको छ ।
यस्तै, कांग्रेसले सरकार व्यक्तिगत निहित स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्ने बाटोमा हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यसरी जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्दा भविष्यमा नेपाललाई ठूलो ऋणको बोझमा पार्ने सम्भावना बढेको भन्दै नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार तथा विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर राखी सञ्चालन गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
आरम्भ चौतारीको ८.८५% लाभांश पारितः थप दुई लघुवित्त प्राप्ति गर्ने, सञ्चालक समिति चयन
काठमाडौं । आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ८.८५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ ।
सात प्रदेशका ५० स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन, कहाँकहाँ राखिँदैछ ?
काठमाडौं । सात प्रदेशका विभिन्न ५० स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसनको आपूर्ति, जडान, परीक्षण,सञ्चालन
‘नेपालमा मजदूर र रोजगारदाता मिलेर समस्या सम्बोधन गरिन्छ, हडताल हुने अवस्था छैन’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा मजदूर र रोजगारदाता मिलेर समस्या सम्बोधन गरिने र
गण्डकीका प्रदेश सांसद गुरुङ गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ अध्यक्षमा निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघको अध्यक्षमा व्यवसायी रामबहादुर गुरुङ पुनः निर्वाचित भएका
लक्ष्मी बैंकको १२८औं शाखा कास्कीको लेखनाथमा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १२८औँैँ शाखा कास्की जिल्लाको
संघीय निजामति ऐनविरुद्ध उत्रिएका कर्मचारीमाथि प्रहरी दमन, सिंहदरबारबाट ४ पक्राउ
काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा राखिएका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै निजामति कर्मचारीहरुले गरेका